Soodduu Jaatanii Alii Yaaballotti dhaabanii eebbisan "soodduun isaa hin buqqaane ammoo qalbii teena keessa jirti"
"Soodduun Jaatanii Alii hin buqqaane onnee teenna keessa jirti"
"Soodduun Jaatanii Alii ta hin buqqaane onnee teenna keessa jirti"
Shaalaqaa,Kumaalaa Jaatanii Alii adoo jiraate jaarsa silaa nama ganna 78. Adoolessa 2, 1992 Naayroobii Keenyaatti galaafatan. Mootummaa duriitti miilota isaa itti guurratee ijjeesisee f ijjeesise jedhanillee ebelutti tanaan qabamee seeraan himatame hin dhageenne.
Jaatanii Alii,akka namii hedduun yaamuunitti jabaa fi janna biyyaati.Namii biyya bulchu akka abbaan Gadaa Booranaa,Kuraa Jaarsoo jedhutti nama aadaa fi dhugaan biyya dura deemu. "Jabaan hin dhalata."
Wannii cuftii akka abbaan gadaa jedhutti aadaa keessa jirti."Seerii diqqaa guddaa,nadheenii ijoollee…aadaa keessa jira."
Shalaqaa Jaatanii Alii jabaa fi janna biyyaati
Waan Shalaqaa Jaataniin beekan hedduu keessaa sadii:Ijoollee barsiifadhaa, mana diratti jaarradhaa,beesee baankii keeyyadhaa.
"Goota dacheen Booranaa biqilchite,Jaatanii Alii goota akka Taaddasaa Birruu fa waliin seenaan yaadata,"’jedha aabba Guyyoo Boruu.Shalaqaan nama bara hamaa keessa ciniinachaa biyya bulchaa bahe.
"Jara Jaatanii ijjeeseef hardha guyyaan ka gaddaati,nuuf ammoo ammoo gammachuu aarsaa akka isaa bahuuf hundi keenna hin hojjana.”